iPartner7Plusပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိခဲ့သူများနှင့် တွေ့ဆုံလိုက်ပါ!
iPartner7Plus ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားပါပြီ! ဆုရရှိသူတွေရဲ့ အမည်တွေကို အခုပဲ ကြေငြာပေးပါတော့မယ်! ဆုရရှိတဲ့အကြောင်းမပြောသေးခင်မှာ အခုပွဲဟာ ဘယ်လိုပွဲမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြန်ပြောင်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်.
iPartner7Plusဆိုတာဟာ သုံးပွဲဆက်ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်. လက်ရှိပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိတဲ့သူ ၃ဦးကို Retina 4K display 3.1GHz 1 TiBမျက်နှာပြင်အကျယ် 21.5 လက်မရှိသည့် iMac, မျက်နှာပြင်အကျယ် 13 လက်မရှိသည့် MacBook 2.0GHz 256 Gb, နှင့် iPhone7Plus 128Gbတို့ ကို ပထမဆု ဒုတိယဆု တတိယဆုတို့ အဖြစ် အသီးသီးချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ၃ခုပေါင်း အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ ပါတနာကိုတော့(iPartnerပြိုင်ပွဲ၊ iPartner 7ပြိုင်ပွဲနှင့် လက်ရှိ iPartner7Plusပြိုင်ပွဲ) ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ရှိ FBSရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ဆုကို ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်!
iPartner7ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့သူတွေကို ကြည့်ပါ:
ပထမ: မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုဇော်မိုးဟန်က 21.5-inch iMac 3.1GHz with Retina 4K display 1 TiBကို ဆုလက်ဆောင် ရရှိသွားပါတယ်။
ဒုတိယ: မြန်မာနိုင်ငံမှ ခွန်ဝီလျှံထွန်းကပဲ 13-inch MacBook Pro 2.0GHz 256 Gbကို ဆုလက်ဆောင် ရရှိသွားပါတယ်။
တတိယ: အင်ဒိုနီးရှားမှ Safri Syamsudinက iPhone7Plus 128 Gbတစ်လုံးကို ဆုလက်ဆောင် ရရှိသွားပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်! FBSပါတနာ အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခုရရှိသွားခဲ့တဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လက်ဆောင်တွေကို ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်!
သုံးပွဲစလုံးတွက်ချက်တဲ့အခါမှာတော့ တကယ့်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ပါ! ပါတနာတွေဟာ အမှတ်တွေများသထက် များလာကြပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ်ရလာဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်, ဒီမှာကတော့ သုံးပွဲပေါင်း အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ ပါတနာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်:
တရုတ်မှ Zhang Chen - ၃၀၂၅ အမှတ်
ထိုင်းမှ Setthapong Onphuvieng - ၂၅၂၅မှတ်
အင်ဒိုနီးရှားမှ Safri Syamsudin - ၂၄၂၀မှတ်
မင်္ဂလာပါ ထိပ်တန်းပြိုင်ဘက်ကင်း ပါတနာတို့ ခင်ဗျား - FBSကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! သုံးပွဲပေါင်း အမှတ်အများဆုံးရတဲ့ - Zhang Chen ရေ၊ FBSရုံးချုပ်မှာတွေ့ရဖို့ စောင့်တောင်မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး!
ဆုရရှိခဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် - အရမ်းတော်ပါတယ်! Zhang Chenကိုလဲ စိန့်ပီတာဘတ်မြို့မှာတွေ့ဆုံဖို့အတွက် FBSအဖွဲ့သားတွေက စောင့်ကြိုနေပါမယ်. နောင်လာမယ့် ပွဲတွေကို သေချာစောင့်ကြည့်ပြီး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကာ FBSမှ အံ့အားသင့်ဖွယ် ဆုလက်ဆောင်များ ရယူလိုက်ပါ!